Microsoft က Windows ကိုပူဇျောပါမညျ 10 အခမဲ့ဇူလိုင်လအတွက် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Microsoft က Windows ကိုပူဇျောပါမညျ 10 အခမဲ့ဇူလိုင်လအတွက်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 1st ဇွန်လအပေါ်များအတွက် 2015 09.13 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Windows ကို 10 အပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့ update ကိုအဖြစ်လွှတ်ပေးလိမ့်မည် 29 ဇူလိုင်လ, Microsoft ကကြေညာခဲ့သည်.
Microsoft ကတစ်ဦး "က Windows ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်" စနစ် switches မှီက 29 နှစ်အရွယ် operating system ကို၏နောက်ဆုံးအဓိကလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်လိမ့်မည်, သောအခါ, အဆင်သင့်ထွက်လှိမ့်ခံရ updates များကိုပါဝငျ.
ဤသည် Microsoft ၏စီးပွားရေးမော်ဒယ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုခြေတစ်လှမ်း. အဆိုပါ operating system ကို Windows ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အဆင့်မြှင့်အဖြစ်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်7နဲ့ Windows 8.1 ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်အတွင်း.
Windows ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုဗားရှင်း£ 100 အထက်သို့ကုန်ကျခဲ့သည်, အသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာဝယ်ယူသည့်အခါက Windows အသုံးပြုသူအများစု operating system ရဲ့သစ်ကိုဗားရှင်းခံယူပေမယ့်, မဆော့ဖ်ဝဲကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုအဆင့်မြှင့်အားဖြင့်.
Microsoft က Windows ကိုဖန်ဆင်းတော် 8.1, ကို Start menu ကိုပွနျလညျထူထောငျသော, Windows ကိုမှအခမဲ့ update ကိုအဖြစ် 8. Windows ကို 10 နောက်ကျောဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည် ပိုပြီးအကျွမ်းတဝင်ဒြပ်စင် Windows ကိုမှ7နဲ့ Windows ၏ခေတ်သစ်ကြည့်ရှုသူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ် 8.1.
ပို4လူဦးရေသန်း Windows ကိုအများပြည်သူ preview ကိုစမ်းသပ် beta ကိုပါပြီ 10 လအတိတ်စုံတွဲတွေအတွက်, လွှတ်ပေးမီက Microsoft ကပြင်ဆင်ချက်ပြဿနာများကိုကူညီခြင်း. Windows ကိုကလတ်တလောအစီရင်ခံစာညွှန်ပြ 10 ဝေးအဆင်သင့်ထံမှဖြစ်ပါသည်, မျိုးစုံ bug တွေနှင့်ဆက်ကြောင်းနှင့်အတူသေး fixed ခံရဖို့.
လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲတစ်ခုချိန်ညှိခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သံသရာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီပေးနိုငျ, ဒါပေမယ့် Windows အတွက်ကြောင့် Microsoft ရဲ့ပထမဦးဆုံးလူထု outing အလွန်အရေးပါသည် 10 ကနေ bug ကို-တွေ့နေရသည် Windows Vista ကနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ရှောင်ရှားရန်အစိုင်အခဲသည် 2006.
Microsoft ရဲ့ရေရှည်သရော်နေ Internet Explorer သည် Windows အပေါ် Edge ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည် 10, ထို operating system ကို desktop ပေါ်မှာဖြတ်ပြီး apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Windows ဂေဟစနစ်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကတိပြုစဉ်, Laptop နဲ့တက်ဘလက်ပီစီအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စမတ်ဖုန်း.
Microsoft ရဲ့စကားသံကိုထိန်းချုပ်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်နည်းပြ, Cortana, ဒါ့အပြင် Windows နဲ့စမတ်ဖုန်းများကိုကျော်လွန်သည်၎င်း၏ပွဲဦးထွက်စေမည် 10, Apple ရဲ့ Siri နဲ့ Google ရဲ့အခု rivaling. Microsoft ကမကြာသေးမီက Cortana ကိုလည်း iPhone နှင့် Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်စေမယ်လို့ကြေညာခဲ့သည်.
အဆိုပါ Redmond-based ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ Windows ကိုလိုအပ်ပါတယ် 10 အခက်အခဲတွေပြီးနောက်စားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး 14 နှစ်အရွယ်က Windows XP ကို​​မှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဖွဲ့အစည်းများဆွဲဆောင်မှာ hit ဖြစ်.
Windows XP ကို​​နေသော်လည်းထောက်ခံမှုထဲကတစျနှစျထကျပိုဖြစ်ခြင်း, ဟက်ကာများအားဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ကွန်ပျူတာများအားနည်းချက်အောင်, ကွန်ပျူတာများအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာနေဆဲဗြိတိန်၌အပြေးနေကြတယ်, အပါအဝင် 2,600 PC များ NHS စကော့တလန်ကအသုံးပြု.
59689	9 အပိုဒ်, computing, Microsoft က, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, Software များ, နည်းပညာ, Windows ကို, Windows ကို 10
← လူ့ခန္ဓာကိုယ်အံ့ဘွယ်သောအဖြစ်ပါသည် - ပေမယ့်တစ်ဦးတစ်သက်တာအာမခံချက်မရှိပါဘူး ဘယ်လိုသင့်ရဲ့မျက်စိသည်သင်တို့၏အကြံအစည်အပ်နှံ →